Izimpawu of imvubelo ukutheleleka abesifazane: kanjani ukuqaphela?
Kufanele kungathathwa njengesigwebo buyinto ezingemnandi njengoba candidiasis, njengoba isifo esingaphatha ukuzibonakalisa kuphela sangasese. Empeleni, lesi sifo sithinta iyiphi ulwelwesi lwamafinyila yomzimba, kodwa ngokuvamile iningi izimpawu imvubelo izifo abesifazane zenzeka namanje ncamashi sangasese. Okokuqala kuyafaneleka ukuthi evame kakhulu kukhona izimpawu of candidiasis, okuyisona asymptomatic ngokuphelele: kulesi simo, ukukhomba ukutheleleka fungal kungenzeka kuphela uma kwenzeka kuhlelwe luhlolo inpatient. Ukuze izibalo: amaphesenti angaphezu kuka amabili kwabesifazane bazithola thrush ngaleyo ndlela.
Kukholakala ukuthi namuhla bazithola ukutheleleka fungal kungaba cishe njalo owesifazane, kodwa ungakhohlwa ukuthi izimpawu zokuqala imvubelo ukutheleleka abesifazane kungaba uphawu yizifo eziyingozi kakhudlwana futhi izifo ngisho ezithathelwana ngobulili. Ngenxa yalokho, esibophezelayo Kudlula ukuhlolwa khona amagciwane, izifo ezithathelwana ngocansi, ukukhipha khona candidiasis ngenxa. Ekhuluma ezivamile izimpawu imvubelo ukutheleleka abesifazane, kufanele kuphawulwe, okokuqala kunakho konke, ebukhali, ngokungazelelwe yazibonakalisa ukulunywa elikhula ngokushesha endaweni zangasese. Akusiyo imfihlo ukuthi uhlobo umzimba female has a lot of kwalapho, ngokulandelana, yiziphi izenzo ukungakhululeki kule ndawo iba kubuhlungu ngempela. Isiqinisekiso obengeziwe khona we ukhunta Candida Akukhona ukubukeka yokuqhuma elimhlophe lwamafinyila ngisho nangemva izinqubo yokuhlanzeka, kanye okuvela ezimhlophe nokunjengoshizi kusheshisa esithweni sangasese ngqo. Ngokuvamile lena izimpawu imvubelo ukutheleleka e amantombazane (isithombe kahle show idatha gqamisa umbala).
Lokubaluleke kakhulu kulokhu kuzodingeka ubunjalo candidiasis, ngoba izifo ngezinye izikhathi fungal engaveza ngokwabo kuphela njengoba njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, isibonelo, kwi zokwenziwa zangaphansi. Kulokhu, kuzoba ngokwanele nje ukuqeda imbangela yokucasuka. Okuningi esiyingozi nakakhulu inketho lapho izimpawu imvubelo izifo abesifazane zenzeka emva kocansi olungaphephile: kulokhu isifo zingakufakazela AMB khona izifo ezimbi nakakhulu, Venereal imyuschih uhlamvu. Ngokuvamile lolu hlobo of izimpawu candidiasis ahambisana ububomvu okucacile umthondo, kanye nesimungumungwane esikhumbeni. Kwezinye izimo, kuba ukuchama ubuhlungu, futhi umuzwa ukushoshozela ngesikhathi kocansi.
Ekhuluma izimpawu imvubelo ukutheleleka abesifazane, kufanele sinake endabeni inkambo njalo lesi sifo, eziningi zazo babonakalise izimpawu njalo ezinyangeni ezimbili noma ezintathu. Kulokhu, udinga ukwelashwa eside kuhambisana ushintsho endleleni yokudla, kanye ukuthatha ezihlukahlukene izidakamizwa, okuhloswe ngalo ukuqeda lesi sifo kwabanye.
Catarrhal pharyngitis: Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa
Pemphigus vulgaris: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa, imithi. izifo sokuhlasela kwamasosha omzimba
Uma kukhona nitrate ubuthi: Izimpawu
Yini engayilungisa kusuka ku-fillet ye-tilapia?
Krasnodar - eMoscow: ibanga, izindleko amathikithi wesitimela